Bergen oo mamnuucday in 20 qof ka badan ay hal meel isugu imaadaan. - NorSom News
Bergen oo mamnuucday in 20 qof ka badan ay hal meel isugu imaadaan.
Maamulka golaha deegaanka magaalada Bergen ee dalkan Norway ayaa soo saaray amar ah inay mamnuuc tahay in hal goob ay isugu imaadaan wax ka badan 20 qof.
Maamulka magaalada ayaa sheegay in qofkii jabiyo amarkan uu lamid noqonayo qof jabiyay amarada kale ee la xiriira ka hortaga faafitaanka xanuunka Covid-19, uuna la kulmi karo ganaax lacageed ama fal-celin adag.
Xigasho/kilde: Forbud mot private sammenkomster med mer enn 20 personer i Bergen.
Previous articleBaashe Muuse: Siyaasi Ubah Adan waxey hurineysaa khilaafka Tawfiiq.
Next articleDaawo waalidiinta Tawfiiq: Waalidku yeysan ku dhex milmin khilaafka maamul ee labada guruub.